Author: TT - ထွန်းထွန်း - Title: ရွာဦးကျောင်းက သရဲ တစ္ဆေများ (၁) - Ainmat.com - Myanmar Blog - Poems - Short Stories - Personal blogs - Online Myanmar Burmese Writings
Random Entry: စုန်းကဝေ၏ တောင်းဆု
< ဟာသကာတွန်းများ | ငှက်သိုက် ကိုယ်တော် ရဲ့ အဖြေ >
Title : ရွာဦးကျောင်းက သရဲ တစ္ဆေများ (၁)
ရွာဦးက ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းမှာ အလွန်အရ်ိပ်ကောင်းသော အပင်ကြီးများနှင့် စိမ်းစိမ်းစိုစို ရှိလှပါသည်။ နွေရာသီ တွင်ပင် အလွန် အရိပ်ကောင်း၍ ကလေးများ အမြဲ ဆော့ကစားရာ လူကြီးများ အမြဲ စကားစမြည် ပြောဆိုရာ နေရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီအပင်များထဲမှ ယူကလစ်ပင်တစ်ပင်သည် ကျောင်းဆောင် တစ်ခုနှင့် နီးကပ်စွာ ပေါက်နေသည် ။ အရွက်အကိုင်းများ လေတိုက်လျှင် အမြဲ ကျိုးကျသည်။ တနေ့ တွင် ဆရာတော် တပါးသည် အကိုင်းများ ကျိုးကျနေသည်ကို မြင်သော အခါ အနီးအနားတွင် လူရှိပါက အန္တရာယ် ရှိနိုင်သည့် အတွက် ယူကလစ်ပင်ကြီးအား ခုတ်ပစ်ရန် စီမံတော့သည်။ ခုတ်နေစဉ် အတွင်း အကိုင်းတစ်ခု ကျိုးကျ၍ ဆရာတော်သည် ခြေထောက် ပွန်းသွားသည်။ " ဒီယူကလစ်ပင် တော်တော်ဒုက္ခပေးတယ် မြန်မြန် ခုတ်ပစ်တာကောင်းတယ်ဟု " လွှတ်ကနဲ အော်ဟစ် ပြောဆိုလိုက်မိသည်။ များမကြာမီနေ့ များမှာ ယူကလစ်ပင် ခုတ်ခဲ့သော ဆရာတော်သည် နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဗိုက်ကနာသလို ၀မ်းကလည်းသွားသည်။ ဆေးသောက် ဆေးကုသ သော်လည်း မပျောက်နိုင်ပဲ ကုတင်ပေါ်တွင်သာ တလှဲလှဲ နှင့်နေနေရသည်။
တနေ့ဆွမ်းစားအပြီး စကားစမြည် ပြောဆိုနေချိန်တွင် ကျောင်းတိုင် ဆရာတော် ဆီသို့အပြင်မှ အသက်ကြီးကြီး ခေါင်းပေါင်းနှင့် လူတယောက် ၀င်လာပြီး လျှေက်ထားသည်မှာ " ဤဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ဆရာတော် တစ်ယောက် နေမကောင်း ဖြစ်နေပါသလား ။ ဖြစ်နေလျှင် ဖြစ်ရသည်မှာ ဆရာတော်သည် အပင်တစ်ပင်အား အခွင့်မတောင်းပဲ ခုတ်လိုက်သောကြောင့် အပင်၌ မှီခိုလျှက် နေသော တစ်စုံတစ်ယောက်က ဒေါသထွက်၍ လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ ထိုတစ်စုံတစ်ယောက်အား တောင်းပန်ပြီး နေရာအသစ်ပေးလိုက်လျှင် အဆင်ပြေသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း " လျှေက်တင်ခဲ့သည်။ စကားပြောနေစဉ် ကျောင်းတိုင် ဆရာတော်သည် တခြားကိစ္စ ကြောင့် သတိ သေချာ မပြုမိလိုက်မိပေ ။ သတိထားမိသော အခါ ထိုလူကြီးသည် မရှိတော့ပါ ။ ဘယ်ကလည်း ဘယ်သူသိလည်း မေးမြန်းသောအခါ ကျောင်းက မည်သူကမှ မသိ မတွေ့ မိကြောင်း ဆရာတော်ဘုရားကို လျှောက်ထားကြသည်။
နေမကောင်းဖြစ်နေသော ဆရာတော်သည်လည်း သက်သာ မလာပဲ တစ်နေ့ တစ်ခြား ပို၍ ဆိုးလာသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ကျောင်းတိုင် ဆရာတော် ဘုရားသည် ဟုတ်သော်လည်း အမြတ်၊ မဟုတ်သော်လည်း အကျိုးမယုတ် ဟုတွက်ခါ လူကြီးပြောခဲ့သော စကားကို သတိရ၍ လူကြီး အကြံပြုချက်အတိုင်း လုပ်ရန် ဆုံးဖြစ်လိုက်သည် ။ ခုတ်ထားသော ယူကလစ်ပင် ကြီး အနားသွား၍ တောင်းပန်စကား ပြောကြားပေးသည် ။ "ဤယူကလစ်အပင်၌ မှီခိုလျှက် နေခဲ့သောသူ၊ အပင်အား ခွင့်မတောင်းပဲ ခုတ်မိသော ဘုန်းကြီးအား အပြစ်မယူရန် ၊ အများကောင်းကျိုးကို ကြည့်၍ ဘုန်းကြီးက ခုတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဘေးနားက သရက်ပင်အား သူကို အစားပေးပါကြောင်း ၊ သရက်ပင်တွင် ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ရန် နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ သူများကို နောင် ဒုက္ခ မပေးရန် တောင်းပန် " ပြောဆိုသည်။ နောက်နေ့ များမှ စ၍ နေထိုင်မကောင်းသော ဆရာတော်သည် သိသိသာသာ အခြေအနေ တိုးတက်၍ ပြန်ကောင်းမွန်လာသည်။
ဆရာတော်များ တောင်ပေါ်သို့ ရောက်သောအခါ အံ့သြဖွယ်ရာ သူငယ်မလေးနှစ်ယောက်သည် အရင်ရောက်နှင့်သည်ကို တွေ့ ရသည်။ မေးမြန်းကြည့်သော အခါ သူငယ်မလေးများသည် သူတို့ လာနေကြမို့ လို့ဖြတ်လမ်းတွေ သိသဖြင့် အရင် ရောက်နှင့်တာ ဖြစ်ကြောင်း မတင်မကျ ပြောပြသည် ။ သူငယ်မလေး နှစ်ယောက်သည် ဆရာတော်များအား ရေအေး ရေနွေး ကပ်ချင်ပါကြောင်း လျှောက်ထားသည်။ ဆရာတော်များလည်း လက်ခံ၍ ဆုမွန်ကောင်းများ တောင်းပေးလိုက်သည် ။ တောင်အောက်သို့ပြန်ကြွခါနီးတွင် သူငယ်မလေးနှစ်ယောက်ထဲမှ တစ်ယောက်သည် ကိုရင်ကြီးတစ်ပါး နားကပ်၍ "နောင် ကံမကုန်လျှင် ပြန်ဆုံလိုကြောင်း နှင့် သူ့ နာမည်မှာ မနှင်းဖြူစော ဖြစ်ကြောင်း ၊ သူ့ အား သတိတရ လိုအပ်တာရှိလျှင် တမ်းတလိုက် စေချင်ကြောင်း " ဦးချ၍ ရှောက်ထားခဲ့သည်။ တအံ့တသြနှင့် ဆရာတော်များလည်း ပြန်ကြွခဲ့ကြသည်။ အပြန်လမ်းတွင် ချောချောမောမော ရောက်ခဲ့သည် ။ လမ်းခုလတ်တွင် သူငယ်မလေးနှစ်ယောက်သည် ရေပူရေအေး အကြိမ်ကြိမ် ကပ်ခဲ့သည်။
မှတ်ချက် - နဲနဲရှည်သွားပြီ ကျွန်တော် နောက်မှ ဆက်ရေးတော့မည်။ ကိုရင်ကြီး ၊ မနန်းဖြူစော ၊ ယူကလစ်ပင် မှ သရက်ပင်ရောက်သွားသော သူ ၊ အပြုစားခံရသော ကိုရင်လေး ၊ ဆရာတော် မြင်တွေ့ လိုက်သော အရက်မြင့်မြင့် အသားမဲမဲ သူ ၊ သပြေပင်အောက်နားက ကိုရင်လေး မွေးထားသော သရဲလေး နှစ်ကောင် အကြောင်းများ ကျွန်တော် နောက်မှ ဆက်ပြောပြတော့မယ်ဗျာ ။ ကျွန်တော့်အား ပြောပြသည့် သူများသည် ယုံကြည်လောက်၍ ကျွန်တော် အတွက်ကတော့ တကယ့် အဖြစ်အပျက် များဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်အစက ပြောခဲ့တာကို မမေ့ကြပါနှင့် ၊ ဤ အရာများကို ကြားဖူးသော ပုံပြင်များ အဖြစ်သာ မှတ်ထားစေလိုပါသည်။
: TT - ထွန်းထွန်း
Current Pts: 61, 239 vote(s) 29991 hits
Defined tags for this entry: ghost, life after death, super natural, tale
မွေးဂဏန်း၊ စားဂဏန်း ၊ ပတ်ဂဏန်း နဲ့ဂဗ္ဘီရလိုင်း
#1 tapyaythu on 2006-05-01 17:14
arrr ko tun.. you did it again
too many unfinished story naw
lu ko toe lo tway laung lae
you haven't finish the story about your dream too
#2 kalay on 2006-05-01 19:14
#3 Anonymous on 2006-05-01 20:41
kolate, myan myan lay sat yay bar byo...
ya also gotta write abt sa yar kyan.
#4 BB on 2006-05-02 15:51
ကိုကို that BB is not me နော်
#5 Anonymous on 2006-05-02 20:31
ကောင်းခန်းမှာ ဖြတ်တယ် ဆိုရင်လည်း
#6 nn on 2006-05-20 20:11
the stories are cool...
just one thing> the style of writing is a
lil awkward > not to say negative>
the writer tends to mix his own thought while writing it..so making it feels more like conversation-wise (not whole narrating or re-telling) can be very much smoother with putting in details of the plot and action wise keep the story line straight...but anyhow it vividly described..
a long foreword to readers too hehehe:P
#7 OATSARYU on 2006-05-27 00:19
ုအာဗျာ ကျနော်က ကြောက်တတ်တယ်ဗျ။
ကောင်းတော့ ကောင်းတယ် ကြောက်တယ်ဗျာ.........
#8 phoehtet on 2006-05-28 11:53
so,carry on about this.
i think , the audience want to finish the story.
#9 berrypink on 2006-06-09 02:15
KL...akhu hti lae sat ma yae thay buu................we are waiting!!!
#10 10 on 2006-06-25 20:21
All of your stories are cool and i love all the stories and especially i interest about ghost and other unbelievable case in Myanmar,
If you can, please write the whole stories.
#11 yehtut (Link) on 2006-07-09 08:19
Good One ,please finish this story!!!
#12 Min Aung Kyaw on 2006-10-08 11:01
Damnn !! now how am i gonna sleep at nite ? i'm in touble
#13 Luiferian on 2006-10-30 10:34
myan myan lay yae byar naw...
lal pin shale pu bya....
#14 aung aung on 2006-11-25 13:55
i'd love to read ghost stories whether it's real or not..So pls write as mush as u can
#15 pyae on 2007-07-24 09:56
very interesting stories!! but too short.. Please share with us and continue the rest stories you mentioned because i am addicted.
#16 honey on 2008-01-30 20:52
#17 zero on 2008-07-03 07:12
bar gti hman lae' ma thi bu? tan lan gyi.
#18 someone on 2008-08-03 06:29
ဘယ်တော့မှဆက်ရေးမှာလဲဟင် .. မြန်မြန်လေး ရေးပေးပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်
#19 နုနု on 2008-08-26 22:10
phit nai pa tal.sat yaye pa ohm
#20 pein pein on 2009-03-15 03:33